Herisetra ataon'ny polisy any Nizeria: niantso an'i Beyonce i Tiwa Savage hanatevin-daharana ny feony amin'ny hetsika #EndSARS - teles relay
Herisetra ataon'ny polisy any Nizeria: niantso an'i Beyonce i Tiwa Savage hanatevin-daharana ny feony amin'ny hetsika #EndSARS
Mitombo hatrany ny fihetsiketsehana fanoherana ny herisetra ataon'ny polisy any Nizeria. Raha kintana toa an'i Davido, Wizkid ... naneho ny fanohanany ireo Nizeriana an'arivony nidina an-dalambe, Tiwa Savage niantso an'i Beyonce hanatevin-daharana ny feony amin'ny hetsika #EndSARS.
Niantso an'i Beyonce i Tiwa Savage hanatevin-daharana ny feony amin'ny hetsika #EndSARS. Raha ny filazan'ilay mpihira dia tsy tokony hangina i Beyonce satria mijaly ny Nizeriana. “Te hampiasa ny sehatra misy ahy aho hiantsoana an'i Beyonce sy ny ekipa iray manontolo izay nifandray Nizeriana marobe; Mpanakanto Nizeriana, mpamokatra, talen'ny horonantsary, mpandihy, haitao. Miantso an'i Beyonce sy ny ekipany aho tamin'ny fomba nampiasan'izy ireo ny lampihazo mba hampitraka sy hanehoana an'izao tontolo izao fa Black Is King sy ny hatsaran-tarehin'i Afrobeat, Afrika ary ny kolontsaintsika.
Satria ny firenena nahita ny fahaterahan'ity karazana ity dia nirehitra ankehitriny. Ny toerana niavian'ireto famoronana ireto dia may. Ka miantso an'i Beyoncé sy ny ekipa iray manontolo aho ary milaza amin'izy ireo fa tsy afaka tsy hiraharaha izany ianao, fa tsy afaka hangina. Satria nankalaza ny Black Is King isika rehetra.
Tena nirehareha manokana aho fa anisan'ny tetikasa. Fantatro fa hankahala ahy ny olona, ​​fantatro fa hanana fihetsika ratsy manoloana an'io aho, misy aza ny mety ho lisitry ny mainty ahy noho io ", hoy izy tamin'ny horonantsary nampitaina tamin'ny tambajotra sosialy.
Raha tsiahivina, nanomboka ny herinandro lasa teo, nidina an-dalambe ny Nizeriana mba hitaky ny fandravana ny Squad Special Anti-Robbery Squad (SARS), voampanga ho nampijaliana, nampijalina ary novonoina ho faty.
Manantena aho fa hahatratra ny Mpanjakavavy B. ny SOS an'i Tiwa.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tao amin'ny http://www.culturebene.com/63212-brutalite-policiere-au-nigeria-tiwa-savage-appelle-beyonce-a-joindre-sa-voix-au-mouvement-endsars.html
TELES RELAY 26921 Lahatsoratra 1 hevitra
Kristen Stewart dia nanafy ny akanjo fohy niaraka tamin'i Chanel teo amin'ny karipetra mena tamin'ny taona 2019 tao amin'ny Festival Film Deauville - Video